Waa maxay guddiga aluminium Aluminium waa nooc bir ah oo ku saleysan alwaax ku xiran alwaax alwaax leh oo leh shaqo faafidda kuleylka wanaagsan. Guud ahaan, hal guddi wuxuu ka kooban yahay saddex lakab, kuwaas oo ah lakabka wareegga (bireedka naxaasta), lakabka dahaarka iyo lakabka salka birta. Waxay ku badan tahay waxyaabaha nalalka LED-ka. Tan ...
IPC waxay ku dhawaaqday natiijooyinka Noofambar 2020 barnaamijkeeda tirakoobka ee Waqooyiga Ameerika (PCB). Qiyaasta buug-ilaa-biilku waa 1.05. Wadarta shixnadaha PCB Waqooyiga Ameerika bishii Nofeembar 2020 waxay ahaayeen boqolkiiba 1.0 marka loo barbardhigo isla bishii la soo dhaafay. Marka loo barbardhigo bishii ka horreysay, N ...
Isku xirka PCB: Saamaynta Qiimaha PCB inta lagu jiro Faafida
Maaddaama adduunku isku hagaajinayo saamaynta aafada adduunka, waxaa jira ugu yaraan waxyaabo loo cuskan karo inay ahaadaan kuwo joogto ah. Dhaqaalaha Shiinaha oo la halgamay bilowgii masiibada, si xoog leh ayuu u soo kabtay, iyadoo wax soo saarka Shiinaha uu kordhay 9-keedii oo toos ah ...
PCB Connect BV Kireyso Bill van de Griendt oo ah Maamulaha Xisaabta Furaha
Iyada oo leh taariikh ballaaran oo ku saabsan warshadaha PCB, Bill van de Griendt PCB Connect BV oo ah Maamulaha Xisaabta Furaha ee suuqa Dutch. Isaga oo leh taariikh adag iyo aqoon badan, waayo aragnimadiisa balaaran ee 10 sano ee PCB warshadaha iyo 25 dhanka elektaroniga ah, shirkada ayaa leh Bill ayaa sii wadi doona ...